अनशन बस्न इलाम पुगेका डा. केसीले गरे ७ दिनका लागि अनशन स्थगित (विज्ञप्ति सहित) «
अनशन बस्न इलाम पुगेका डा. केसीले गरे ७ दिनका लागि अनशन स्थगित (विज्ञप्ति सहित)
काठमाडौं,१८ पुष । १६ औ अनशन बस्न इलाम पुगेका डा. गोविन्द केसीले ७ दिनका लागि अनशन स्थगित गरेका छन् ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले सहमति अनुसार विधेयक ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउँदै समय मागेपछि डा. केसीले अनसन पुष २५ गते सम्मका लागि स्थगित गरेका हुन् । ‘यसबीच चलखेल भएको अवस्थामा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं’ डा. केसीद्वारा रा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै,१५ औं सत्याग्रहका बेला संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा निश्चित संशोधनहरुसहित पारित गर्ने, उपत्यकाबाहिर विभिन्न ठाउँहरुमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने लगायतका बुँदाहरुमा सम्झौता भएको थियो ।